Somali Concern Group
BAYAAN Qoraal Ah OO URURKA SCG ay u gudbiyAY dowlada KMG
Annagoo ka duulayna xaaladda uu xilligan dalku ku sugan yahay, dareensanna khatarta ka iman karta khilaafka u dhaxeeya xubnaha labada gole ee dowladda iyo baarlamaanka ee sii kordhaya ayay noola muuqatay inaan muujinno mowqifkeenna ku beegan arrintan, annagoo gudanayna waajibka naga saaran jiritaanka ummadeena iyo qaranka soomaaliyeed.
Sidaan horeyba u caddeynay SCG waxay si buuxda u taageersan tahay natiijadii ka soo baxday shirkii dib u heshiinta labada sano iyo barka loo fadhiyay waddanka Kenya ee lagu soo dhisay golaha baarlamaanka iyo dawladdaba, sidaa daraadeed waxaan ku baaqeynaa in laga hortago wixii burbur keeni kara, kana hor iman kara in dawladda curdanka ah ay taaba gasho.
Waxaan xasuusinaynaa madaxweynaha, ra’iisul wasaaraha iyo guddoomiya baarlamaanka in dowladani tahay dawlad ku dhisan dib u heshiisiin iyo talo wadaag Islamarkaana iska horimaad uuna xal keeni karin.
Dawladdan waxaa lagu dhisay ayna ku hirgeli kartaa oo keliya:
Dib u heshiin dhab ah oo laga bilaabo xubnaha labada gole loona gudbiyo shacab weynaha soomaaliyeed.
Wada tashi dhab ah iyo aragti midaysan si go’aan looga gaaro arrimaha xasaasiga ah.
In khilaafka labada gole lagu dhammeeyo wada hadal ku dheehan waddaniyad iyo daacadnimo iyadoo mar kasta la hormarinayo danta shacabka iyo jiritaanka qaranka soomaaliyeed.
In Madaxweynaha iyo Ra’iisul wasaaruhu ay ka tanaasulaan keenista ciidamada dowladaha safka hore, kaas oo aasaas u ah khilaafka taagan.
Waxaan marnaba suuragal ahayn in labada gole ay fariisin ka dhigtaan saddex magaalo oo kala duwan iyadoo laga fiirinayo xag dhaqaale, tasiilaad, farsamo, iyo nabadgelyaba. Sidaas daraadeed waxaan ku talinaynaa in labada gole ay degaan caasimadda waddanka ee Muqdisho, si wadajir ahna loo dhamaystiro howsha nabadeynta ee ka socota magaalo madaxda. Waxaan hubaal ah in tegitaanka dowladda ee caasimadda ay dowr wayn ka qaadaynayso nabadeynta, habsami u socodka hawlaha dawladda iyo dib u heshiisiinta shacabka soomaaliyeed.
Waxaan sidoo kale xasuusinaynaa hoggaamiya kooxeedyada ku sugan muqdisho kana tirsan labada gole in ay ahaayeen kuwii nabadda ka qaaday una diidanaa xasiloonida caasimadda 14kii sano ee la soo dhaafay, shacabkuna uu ku bartay inay yihiin kuwa aan fulin ballamada ay galaan taasoo yareynaysa in la aamino. Sidaa daraadeed waxaan u soo jeedinaynaa in ay ka dhabeeyaan hawsha nabadaynta caasimadda, oo ay ugu horrayso baabi’inta jidgooyada iyo amnidarrada.
In guddoomiyaha baarlamaanku uu ku dadaalo sidii uu meel isugu keeni lahaa dhammaan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliyeed si uusan baarlamaanku u burburin. Waxaa kale oo aan ka digaynaa in waqtigan xasaasiga ah la kala fasaxo xubnaha baarlamaanka.
Waxaan xubnaha baarlamaanka xasuusinaynaa inay yihiin hey’addii ugu sarreysay ee qaranka Soomaaliyeed, sidaas darteed waxaan ka codsaneynaa iyagoo tixgelinaya duruufta adag ee uu qaranka Soomaaliyeed ku sugan yahay maanta inay ka sara maraan khilaafka shakhsiga ah ee ku dhisan danaha gaarka ah, horseedna u noqon kara burburka baarlamaanka iyo qarankaba.
In shacabka Soomaaliyeed meel walba oo ay joogaan ay dowr fiican ka qaataan sidii ay dowladdan u meelmari lahayd, si looga gudbo marxaladan adag ee soo foodsaartay dalka iyo dadkiisa.
Waxaan ka xunnahay dagaalada ka soo cusboonaaday gobollada dalka qaarkood oo dad Soomaaliyeed ugu dhimanayaan sabab la’aan, waxaana ku talinaynaa in si deg deg ah oo shuruud la’aan ah loo joojiyo dagaalada, khilaafaadka jirana lagu dhammeeyo wada hadal.
SCG waxay u heellan tahay sidii dalka loogu soo celin lahaa nabad iyo nidaamkii dawladnimo, waxaana diyaar u nahay in aan si wadaninimo ku dheehan tahay u dhex galno uguna kala dab qaadno labada garab ee labada gole, si looga fogaado burbur ku yimaada mirihii ka dhashay shirkii kenya.
Mr Abdirahman Omar Osman (Eng. Yarisow)
Chairperson of Somali Concern Group
Contact Address: PO Box 461, Southall, UB1 9AF, UK
Tel: 07932 722 651, e-mail: Somali@somaliconcern.org